Iitatoo zehlathi, kubathandi bendalo | Ukuzoba
Iitattoo zamahlathi kubathandi bendalo kunye nobomi obunempilo
Ukuba kukho umvambo endihlala ndiwuthanda kwaye kuyandichukumisa ukuwubona kulusu lwabantu, kuxa ihlathi lihlotywa kulusu lwabo. Ukuba i-tattoo yenziwe kakuhle, ngamanye amaxesha ikhangeleka ngathi ifoto. Ndithanda kakhulu amahlathi asebusuku apho izithunzi ezimnyama zibalasele kakhulu.
Kukho abantu abakhetha ihlathi ukubeka imithi, kodwa kukwakho nabo bakonwabelayo ukongeza ezinye izinto kuyilo, bangathini ukuba zizilwanyana zasebusuku, ingcuka, iinkwenkwezi, njl. Ukuba uthanda ii-tattoos zomhlaba okanye indalo ngokubanzi, kunokwenzeka ngakumbi ukuba iitatoos zehlathi ziyinto yakho.
Iitattoo zamahlathi zihlala zifanekisela uthando umntu aziva ngalo ebomini nakwindalo. Kwaye kukuba abantu bakulelizwe banombulelo kulo kwaye ngenxa yemithi namahlathi basinika umoya ococekileyo owaneleyo kuthi sonke esiphefumla ngeoksijini.
1 Umvambo oyinxalenye yendalo
2 Iitattoo zendalo, umlingo omncinci
3 Isuntswana lokomfuziselo
4 Kuphi ukufumana itattoo yehlathi
5 Olunye uhlobo lwendalo
5.1 Iitattoos zehlathi elinomtsalane
5.2 Iitattoos zobuhle bentaba
5.3 Iithambo zehlathi lePine
6 Imifanekiso yeetattoos zehlathi engalweni
7 Imifanekiso yeetattoos zehlathi emlenzeni
Umvambo oyinxalenye yendalo
Amahlathi ebeyinxalenye yendalo kwangaphambi kokuba abantu babekho. Oku kubuyela kumaxesha angaphambi kokubhalwa kwembali, apho kwakuhlala khona izinto zakudala ... amahlathi yayingamakhaya ezi zinto. Yale Kubantu abaninzi, amahlathi ayindawo engcwele.
Yisimboli sobomi, ukuzola, ukuhlaziya nokunye okuninzi. Intsingiselo yamahlathi ibisanda kwaye isanda ngokuhamba kwexesha kwaye oku kuthetha ukuba kumaxesha anamhlanje, ihlathi lisathetha izinto ezininzi, kwaye ngenxa yeso sizathu ... zingumbono olungileyo wokwenza itattoo.
Amahlathi ayazaliswa bubomi kwaye iimfihlakalo zawo ziyasivuyisa. Ihlathi linokuthetha izinto ezininzi komnye umntu nakwezinye, ngokuchasene noko. Kusemandleni omzobi ukufumana umvambo obalaseleyo kwaye intsingiselo mayifumane amandla. Nokuba luhlobo lwemithi olukhethelwe uyilo lunokuba neentsingiselo ezahlukeneyo kunokuba kukhethwe ezinye iintlobo zemithi.
Kukho abantu abakhetha ukudibanisa iintlobo zemithi ukuba neentsingiselo ezahlukeneyo kwaye uphawu lubanzi. Abanye abantu bakhetha ukongeza izinto ezenza uyilo lube nomdla ngakumbi kunye nentsingiselo enzulu.
Amahlathi nemithi ziyafana kubomi bethu ... sinethuba lokufumana imijikelezo ngohlobo lwemiceli mngeni kunye neenkumbulo. Inokuthelekiswa namaxesha emithi kunye nokutshintsha kwawo ngokuhamba kwexesha. Umzekelo, ekwindla lixesha elizolileyo nelinoxolo, emva koko kuza ubusika oburhabaxa apho kubonakala ngathi yonke into ifile ... kodwa emva koko kuza intwasahlobo ngokuzalwa ngokutsha kunye nethemba, kunye nobuhle kunye nokonwaba kwehlobo eliza kuza kamva.
Ixesha lonyaka apho kutsalwa kulo tattoo linokunika intsingiselo entsha kumvambo kwaye ubalise ibali. Umfanekiso unokuba neenkcukacha ezininzi ezahlukeneyo, kodwa unokuba nentsingiselo enzulu.
Into emnandi ngezi tattoos kukuba xa igqityiwe, ukukwazi ukucinga ngayo sisipho samehlo. Kubonakala ngathi ngumlingo osincedayo ukuba siphile kwaye sizithuthe siye kuloo ndawo, apho sinokuthi senze uvavanyo lwesazela, apho sinokukhula kwaye sibe ngcono. Kukho uyilo lokomoya ngakumbi kunolunye, kukwakho nezinye ezimnyama, kangangokuba zinokubangela ukuba woyike. Into ebalulekileyo kukuba uyilo olukhethayo lukwenza uzive njani.
Iitattoo zendalo, umlingo omncinci
Kubantu abaninzi umvambo wehlathi unokuba nenqaku elithile lomlingo, kuba amawaka eminyaka amahlathi ebesoloko engabakhokeli bamabali, iintsomi kunye nezithethe.. Kumahlathi bekusoloko kukho izidalwa ezinomlingo, izidalwa zokomoya ... okanye ujonge kwelinye icala lengqekembe ... izidalwa ezoyikisayo eziphuma ebusuku zoyikisa amaxhoba azo.
Kodwa inyani kukuba ii-tatoos zehlathi ziyindlela yokonwabela ubophelelo abanazo zonke izinto eziphilayo noMama woMhlaba, ukubuyela kwimvelaphi yethu, ukukhumbula ukuba sonke sibanye kwaye indalo likhaya lethu.
Iitattoo zamahlathi zinokudibanisa iintsingiselo kunye neesimboli ezahlukeneyo, ezinjengokucocwa komlambo okanye ukomelela kweentaba. Mhlawumbi kuwe kuthetha ukuba ubungangamsha bomthi wemithi.
Kwezi tattoos, iintsingiselo ezahlukeneyo kunye neesimboli ziyadityaniswa, ezinjengokucocwa komlambo okanye umlambo kunye namandla eentaba kunye nobungangamsha bomthi wemithi. Kodwa njengakuyo yonke into, intsingiselo kunye nophawu lwe tattoo yehlathi luya kuxhomekeka kumava akho nakwinto eyenzekileyo kuwe ebomini.. Uyakwazi ukufumana intsingiselo yakho enokuthi ingavuyisi kwaye ihambise kodwa iyinto embi ngakumbi kwaye iyoyikisa ... njengoloyiko lokuba wedwa phakathi ehlathini ungazi nokuba uye ngaphi, kubanda, kunxanwa, kulamba kwaye uve ingxolo engaqhelekanga.
Kuphi ukufumana itattoo yehlathi
I tattoo yehlathi, njengoko unokuthelekelela, ngumvambo odinga indawo kunye nomsebenzi omninzi. Ndikucebisa ukuba igcisa eliza kwenza itattoo yingcali ekwenza uyilo olwamkelayo ngaphambi kokuqala i tattoo, ke uya kwazi ukuba umzobo oza kuba nawo kulusu lwakho ngonaphakade, iya kuba ngumzobo uyayithanda kwaye uyonwabele ukuyijonga kwakhona.
Le tattoo ilungele amadoda nabasetyhini, kuba iya kuxhomekeka kukhetho lwakho leyo ukhetha i tattoo enye okanye enye. Kwindoda kuyamangalisa kwaye kumfazi, nangona ubukhulu bunokuba buncinci, bunokulunga kakhulu.
Eyona ixhaphakileyo kukuba olu hlobo lweetattoo lwenziwa kwiindawo ezinkulu okanye ezinde zomzimba ezinje ngomqolo, ithanga okanye ingalo.
Olunye uhlobo lwendalo
Ukongeza kwi Iitatto zasehlathini, Esaziyo sonke, umbono uvumela ukuba sonwabele ezinye iindlela ezifanelekileyo. Ewe kunjalo, ayisiyongcamango kuphela kodwa nendalo ngokwayo ethatha isigqibo. Ukuba uyayithanda, mhlawumbi ezi ndlela zilandelayo ziya kubandakanywa kwiiprojekthi zakho ezilandelayo eziza kwenziwa kulusu lwakho.
Iitattoos zehlathi elinomtsalane
Amahlathi yenye yeendawo apho ubomi bukhoyo, kodwa nomlingo. Iinyani zesayensi kunye nezinto ezenzekileyo zinokubonakaliswa kuloo tattoo. Ewe, ngemifanekiso yemithi emikhulu kunye emnyama ngakumbi eyongezwe izidalwa zobusuku, inyanga epheleleyo okanye izidalwa zokomoya.
I-inki emnyama sisiseko sokugqibezela uyilo olunje. Iindawo ezinjengengalo okanye imilenze ziya kuba zezona zinto zintle zokunika ubomi ku Imithi emnyama neyomileyo.
Iitattoos zobuhle bentaba
Uxolo kunye noxolo zizinto ezimbini ezinokuthi zonwatyiswe kwi-tIitattoo ezinemihlaba yeentaba. Kuyatshiwo ukuba xa sifuna ukukhetha ukonwaba, kungcono sizivumele sihanjiswe ngabo, abazibandakanya nesibhakabhaka kunye nobuhle bekona nganye.
Zombini iingalo, umva okanye ithanga ziya kuba zilungele ukubonisa umonde womsebenzi onje. Nangona kuyinyani ukuba inokubunjwa nayo kwiindawo ezinje ngesihlahla, ngokokuthanda kwakho.
Iithambo zehlathi lePine
Imithi yepayini, nangona sineendidi ezininzi, ihlala inde, inkulu kwaye inamagqabi. Ukususela kumaxesha amandulo kwakunjalo umthi uthandwa kakhulu ngoothixo. Ngendlela efanayo, nkqu ipayinapile yenye yeendlela eziphambili kwiminyhadala ye-Bacchus. Ke, kuyo yonke le nto, ayothusi into yokuba ikwaqhubeka ukubakhona phakathi kwezimvo zethu xa kufikwa kumathambo.
Indalo kunye nesiko ziya kudibana ukuze zinike ubomi kuzo zonke iintlobo zoyilo, kodwa zihlala kunye nepine njenge protagonist. Yiyo loo nto kukhethwe iindawo ezinkulu zomzimba ukuze zibonakale kubo bonke ubuqaqawuli bazo.
Imifanekiso yeetattoos zehlathi engalweni
Kuyinyani ukuba wonke umntu ukhetha eyakhe uyilo, kodwa xa sithetha ngeeTattoos zehlathi engalweni, zihlala zibonwa Inxalenye yengalo. Banokugubungela indawo yesihlahla okanye macala onke. Ngamanye amaxesha sinokuyonwabela iitattoo zamanzi ezinikezela ngobomi obungaphezulu kuyilo olunje okanye ukukhetha i-inki emnyama kuzo zonke.
Imifanekiso yeetattoos zehlathi emlenzeni
Ngokubhekiselele kumvambo wehlathi emlenzeni, unokukhetha Uyilo olwahlukeneyo kwaye uninzi lwabo bayagubungela umva wayo. Yintoni eya kuba yeyona uyithandayo kuzo zonke?
Ngaba sele uyazi ukuba kutheni ufuna itattoo yasehlathini, kutheni uyifuna kwaye uza kuyifumana phi? Sixelele!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo » Iitattoo zamahlathi kubathandi bendalo kunye nobomi obunempilo
Ewe ndinendawo emahlathini kwingalo yasekhohlo kunye nokungagungqi entanyeni ngegama elithi UTHANDO LOBOMI ngesiSpanish elithetha ukuba ndiyabuthanda ubomi, ke ukuba ihlathi lam livumile ngokungapheliyo kwam, oko kukuthi, ndiyayithanda indalo ngonaphakade kuba enkosi kuyo sikhona… ..
URoberto Medrano sitsho
Ndikwanayo ne tattoo ehlathini efileyo iinyanga ezi-3 ezidlulileyo engalweni yam yasekunene kwaye kwimeko yam, ndiyenzile le yoyilo yehlathi ifileyo kuba ndihamba kwinqanaba lobomi bam apho ndiziva kanye ngaloo ndlela, ndomile, ndingenabomi. Kwaye ngamanye amaxesha bandixelela ukuba ngenye imini yonke into izakuphucuka kwaye le tattoo ayinanto yakwenza nayo kodwa impendulo yam ihlala ikukungaze ulibale amanqanaba amabi obomi kuba xa ukhumbula kuxa ucinga ngokungazenzi okufanayo Izinto kwakhona. iimpazamo ezifanayo ezikhokelele ekubeni ubenje.
Phendula URoberto Medrano
Iitattoos eziphakamisa ukuzithemba: 5 imizekelo egqibeleleyo